Kamiaobe nivarina tao anaty rano: tale-na EPP namoy ny ainy, dimy hafa naratra mafy | NewsMada
Noho ny fahanteran’ny tetezan-kazo iray, tao amin’ny Fkt Belavadaka, kaominina Anosibe An’ala no nahatonga ity lozam-pifamoivoizana ity. Nivarina tao anaty rano, vokatr’izany ny kamiaobe mpitatitra entana iray. Ankoatra ireo olona dimy naratra mafy, talena EPP iray no namoy ny ainy.
Potika tanteraka ny fiara, namoy ny ainy kosa ny talen’ny EPP ao Anosibe kely, ary mpandeha miisa dimy naratra, voa mafy ny roa tamin’ireo nandritra ny lozam-pifamoivoizana niseho tao Belavadaka, fokontany Fihaonana, kaominina Anosibe An’ala, omaly maraina manodidina ny tamin’ny 02 ora. Araka ny fantatra, nivarina an-kady ny kamiaobe mpitatitr’entana mampitohy an’i Moramanga sy Anosibe An’ala vokatry ny faharatsiana sy fahanteran’ny tetezan-kazo teo an-toerana. Nambaran’ny zandary misahana ny fanadihadiana fa nivoaka ny tetezana ny kodiarana aoriana havian’ilay kamiao izay nitarika ny fiaingan’ny lohan’ilay fiara ka avy hatrany dia nilatsaka ny vodin’ilay kamiao. Vokany, namoy ny ainy teo no ho eo ny raim-pianakaviana, ary naratra noho ny dona nahazo azy ny lehilahy dimy tao anatin’ny fiara. Fantatra fa isan’ireo voa mafy nandritra ny tranga ny mpamily tompon’io kamiao io ka nalefa nihazo ny hopitaly ireo niharam-boina taorian’ny loza. « Ireo entana kosa, tsy nisy very ary efa nafindra fiara hafa taorian’ny fahatongavan’ny zandary tao Belavadaka ka efa tonga ao Anosibe An’ala avokoa », hoy ny loharanom-baovao. Nambaran’ity farany fa efa eo am-pelatanan’ny fianakaviany kosa ny nofo mangatsiaka an’ilay tale raha mbola tavela ao an-kady kosa ilay kamiao io, hatramin’ny ora farany nanoratanay.
Olona roa hafa namoy ny ainy
Zazalahy 10 taona sy lehilahy mpitondra moto iray no namoy ny ainy, ny alahady teo noho ny ratra nahazo azy tamin’ny lozam-pifamoivoizana tao Antanety-Mandaniresaka, Antsirabe. Nambaran’ny polisy fa nikasa hisongona fiara teo alohany sy niala lavaka ny moto no nifandona mafy tamina fiara nitondra fianakaviana avy any Avaratry ny lalana. Mafy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta, hoy ny polisy. Nambarany koa fa samy tsy nanao aroloha ireo mpandeha miisa telo tamin’ny moto. Nohamafisiny fa nahenoana fofon-toaka ny mpamilin’ny moto raha olona iray tamin’ireo tao anaty fiara sy ny mpandeha fahatelon’ny moto no naratra. Taorian’ny tranga, noentina namonjy hopitaly ireo niharam-boina ary namoy ny ainy teny an-dalana ny lehilahy 39 taona mpamily moto raha tao amin’ny toeram-pitsaboana kosa no namoy ny ainy ilay zazalahy. Misokatra ny fanadihadiana.
Ankoatra izay, kamiao iray no nandona olona manodidina ny efapolo taona, teo amin’ny Pont Mainty, omaly hariva, teny amin’ny lalam-pirenena faharoa. Fantatra fa nipotsaka tanteraka ny lohany.